Ngaphandle kwe-Wildlife Safaris, ngoku kunguKhenketho lweGalufa eMpuma Afrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Ngaphandle kwe-Wildlife Safaris, ngoku kunguKhenketho lweGalufa eMpuma Afrika
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Sports • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
UGqirha Numbaro kunye noMnu Najib Balala kuKhenketho lweGalufa eMpuma Afrika
Ayisiyiyo kuphela i-safaris yezilwanyana zasendle eMpuma Afrika, ngoku ukhenketho lwezemidlalo luza kunyusa uhambo lokuzonwabisa kulo mmandla ukutsala abakhenkethi bezemidlalo ukuba bandise iiphakheji zabo zokuhamba ukusuka kwizilwanyana zasendle ukuya kwimidlalo ngaphandle kweepaki zolondolozo.
Ukhenketho lweGalufa lusandula ukwaziswa njengeminyhadala yemidlalo yokhenketho yengingqi ukutsala umdla wabahambi abatsha abajolise kwezemidlalo.
Umphathiswa Wezokhenketho waseTanzania kunye noNobhala Wezokhenketho waseKenya badibene kwisixeko sabakhenkethi esiseMantla eTanzania i-Arusha ukuzokumisela ukwaziswa kweKhenketho leGalufa eMpuma Afrika.
Iipakeji ezizodwa zokhenketho kwezemidlalo ziya kuthi emva koko zilungiselelwe ukulungela abadlali begalufa bamanye amazwe abatyelele iTanzania.
I-Tanzania neKenya, ezi ndawo zimbini zikhokelayo kwi-safari eMpuma Afrika, zisandula ukumilisela uKhenketho lweGalufa njengeminyhadala yemidlalo yezokhenketho yengingqi emiselwe ukutsala iintlobo ezintsha zokuzonwabisa ezijolise kwezemidlalo ezivela kwingingqi ye-Mpuma ye-Afrika (i-EAC) kunye neendawo zehlabathi. .
Abaphathiswa bezokhenketho abavela kuwo omabini la mazwe bavumile ukwazisa kwaye bandise ukhenketho lweGalufa phakathi kwala mazwe mabini, ngenjongo yokutsala abakhenkethi bezemidlalo ukuba bachithe iintsuku zabo kuloo mmandla.
Ukhenketho lweGalufa Banokutsala abagadi begalufa abakumgangatho wehlabathi ukuba batyelele le ngingqi ze bachithe iintsuku zabo kwii-teeing kumhlaba okhethekileyo wegalufa eMantla eTanzania naseKenya.
UNajib Balala teeing ibhola
Umphathiswa Wezokhenketho eTanzania, uGqr.Damas Ndumbaro, kunye noNobhala Wezokhenketho waseKenya, uMnu Najib Balala, badibene kwisiXeko saseTanzania esisezidolophini kubakhenkethi ukuphelisa ukwenziwa kweKhenketho leGalufa eMpuma Afrika.
Ngoku, uKhenketho lweGalufa kungekudala luya kuba lolunye umtsalane okanye imveliso yabakhenkethi yokutsala iindwendwe zommandla nezamazwe aphesheya, abaza kuthi badibanise iindlela zabo zokundwendwela ezivela kwi-safaris yezilwanyana zasendle kunye neeholide zolwandle ukuya kwi-teeing teeing.
Iipakeji ezizodwa zokhenketho kwezemidlalo ziya kuthi emva koko zilungiselelwe ukulungela abadlali begalufa bamanye amazwe abatyelele iTanzania. UMongameli we-Tanzania Golf Union (TGU), uChris Martin, wayeqinisekile kwaye wathi iTanzania kufuneka iseke indawo yegalufa ukuze itsale abadlali bamanye amazwe kunye nabakhenkethi.
Abadlali begalufa abamalunga ne-140 abaphuma kumazwe ali-13 kuquka iMelika, iAustralia, iCanada, iBelgium, iNetherlands, iNgilani, iChina, iKenya, iIndiya, iZimbabwe, iZimbabwe, uMzantsi Afrika, iUganda, kunye neTanzania.
Ukhenketho lwezemidlalo aluyonxalenye yamaphulo okhenketho eTanzania, kwaye ukumiliselwa kweKhenketho yeGalufa kungatsala inkcitho eninzi apho abakhenkethi banokongeza khona iintsuku ezininzi zokuhlala eTanzania ukonwabela i-golf teeing.
Igalufa yenye yezemidlalo etsala inani elikhulu labakhenkethi kwaye ibiletha ngaphezulu kwe- $ 20 yezigidigidi ngonyaka kwinqanaba lehlabathi.
Kukule ndawo ke apho iTanzania igqibe kwelokuba iqale ukuthengisa ukhenketho ngokusebenzisa itonamenti yegalufa.
Isixeko saseArusha sisiqalo sabakhenkethi ababhukishe kwiipaki zaseMantla zeTarangire, eLake Manyara, eNgorongoro, naseSerengeti.
Ukujolisa kwintengiso yommandla weMpuma Afrika njengendawo enye yabakhenkethi, abaphathiswa bezokhenketho kunye namagosa omgaqo-nkqubo wengingqi avela kumazwe angamalungu amathandathu avumile ukusungula umboniso wonyaka we-EAC yeNgingqi yezoKhenketho (EARTE) ngeenjongo zokuphucula ukubonakala kwalo mmandla kunye nentengiso. njengendawo enye yabakhenkethi.
Amazwe aseMpuma Afrika aza kubamba umboniso omkhulu wezokhenketho kule mpelaveki izayo e-Arusha, isixeko sohambo eMantla eTanzania. Umboniso wokuqala kunye omkhulu wokhenketho owenzeka eMpuma Afrika.
Lo mboniso utsale abathathi-nxaxheba abasuka kumazwe angamalungu eTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, naseSudan ukuba babonise iindawo zabo zokhenketho phantsi kweambrela yokudityaniswa kwengingqi kwezokhenketho.
I-Tanzania kunye ne-Kenya zixhase ukuhamba ngokukhululekileyo kohambo lwengingqi nolwamazwe aphesheya emva kokuba oongameli bamazwe amabini angabamelwane bevumile ukuphucula ukhenketho lwengingqi kunye nokuhamba kwabantu.
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) ngoku isebenza ngokusondeleyo neendawo ezininzi zaseAfrika ukuphucula ukhenketho lwangaphakathi lweAfrika ngokusebenzisa amaqonga okhenketho engingqi.
Umbutho we-East Africa ngoku umi njengomzekelo omhle wophuhliso lokhenketho lwengingqi phantsi kweqonga elinye iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ikwakhankasela uphuhliso kwilizwekazi liphela.